Shiinaha Eyeshadow palette sumadda gaarka loo leeyahay midabka jumlada midabka indhashareerka midabka dabiiciga ah ee warshadaha iyo alaab-qeybiyeyaasha | Qurxinta Iris
Matte lipstick dareere ah
Matte bushinta calaamadda khaaska ah waxay ka kooban tahay iibinta bushimaha ...
Lip liner calaamadda khaaska ah ee naxariis darada ah vel logo caadadii ...
Lipstick Liquid iyo liner liner dhigay jumlada caadadii jumlada ...
bushimaha jumlada caadadii logo vegan vevel bushimaha sti ...
Calaamadaha qaawan ee bushimaha dhalaalaya ee khafiifka ah ee caag galka ah oo dhalaalaya ...
Iibiyaha Lipgloss caadada bushimaha dhalaalaya sumadda gaarka loo leeyahay diy c ...
OEM wejiga aasaaska qurxiyo dareere caadadii jumlada p ...
pava vegge jumlada palette vegan midab sare ...
Muraayadaha indhaha ee sumadda gaarka loo leeyahay ee loo yaqaan 'eyeshadow' midabka midabka midabka ah ee indhaha indhaha leh
Midabada sare ee midabada indha-sarcaadka leh waxay u dhexeeyaan maaddooyinka iyo satins-ka illaa shimmers iyo dhalaalaya. Qaado mid ka mid ah waraaqahaas yar maalin ilaa habeen toosh ah oo ay la socdaan dhammaan isku-dhafka midabbada suurtogalka ah!
Qiimaha EXW: US $ 0.99 - 2.99 / Cadad
Tirada Min.Order: 3000 Piece / Cadad
OEM. ODM: La heli karo
Midabbada indhaha ee midabka midabka midabkoodu sarreeyo, midab jilicsan oo jilicsan oo jilicsan, jilicsanaanta wanaagsan, si midabbada loo isugu dhejiyo, saameyntu waa mid muddo-dheer soconaya, dabiici ah oo soo jiidasho leh, Ma jirto budo, Qiiq ma leh.
Midabku waa mid hodan ah oo firfircoon. Midabada midabada indhaha leh waxay u dhexeeyaan maatida iyo satins-ka illaa shimmer iyo dhalaalaya, markaa codadku way ku kala duwanaan karaan xagasha maqaarka waxayna leeyihiin saameyn kala duwan, taas oo si fudud ula jaan qaadi karta muuqaalkaaga saameyn dabiici ah iyo mid dhalaalaysa.
Maaddooyinka tayada sare leh waxay leeyihiin dhalaal hufan, oo ka dhigi kara midab dhalaalaya adigoon maqaarka ka careysiin, waxyeellada qurxintana waa mid muddo dheer soconaysa.Qaadi mid ka mid ah waraaqahaan yar maalin ilaa habeen toosh yar oo leh dhammaan isku-darka midabbada suurtogalka ah!
Magaca Shayga Palette indhaha
Faa'iidadayada 1. Wax aan naxariis lahayn / Imtixaanna lahayn Xayawaan
2. Vegan / Talc bilaash ah
3. Muddo dheer oo aan biyuhu oolin
4. Hufnaan iyo xariir
5. Midabaynta Sare, Qaab Weyn
OEM / ODM La aqbali karo
Muunad La aqbali karo
Baakadaha 1 kumbuyuutar sanduuqa midabka naqshadeynta
Maraakiibta Hawada / badda / Express
Lacag bixinta TT / Paypal / West union iwm.
1.Q: Ma waxaad tahay wax soo saare ama shirkad ganacsi?
J: waxaan nahay soosaaris xirfadlayaal ah.
2.Q: Immisa midab ayaad u leedahay indhashareerka?
J: Indhoolayaasha midabada guud ahaan waxaan leenahay 140 midab oo aad adigu dooratid, sidoo kale waxaan kuu habeyn karnaa midabadaada.
3.Q: Sideen ku heli karaa shaybaar si aan u hubiyo tayadaada?
A: marka hore, nala soo socodsii shuruudahaaga ku saabsan alaabada, markaa waxaan ku siin doonaa soo jeedin waafaqsan oo waxaan ku siin doonaa xigasho. Marka dhammaan faahfaahinta la xaqiijiyo waxay soo diri kartaa shay-baarka. Qiimaha muunadda ayaa la celin doonaa haddii amar la bixiyo.
4.Q: Ma aqbashaa OEM ODM oo ma noo samayn kartaa naqshadeynta?
J: Haa, waxaan qabanaa OEM ODM waxaanan bixinnaa adeegyo nashqadeyn ah.
5.Q: Muddo intee le'eg ayaan filan karaa in tijaabada la ii qaado?
J: Ka dib markaad bixiso khidmadda muunadda oo aad noo soo dirto faylal la xaqiijiyay, shaybaaraduhu waxay diyaar u yihiin inay keenaan maalmaha 3-7. Shaybaarada ayaa laguugu soo diri doonaa adoo isticmaalaya xawaare sare waxayna imaanayaan 3-7 maalmood. Waad adeegsan kartaa koontadaada tooska ah ama horay noogu sii shubi kartaa haddii aadan xisaab lahayn.
6.Q: Ka waran waqtiga hogaaminta ee wax soo saarka badan?
J: Si daacadnimo ah, waxay kuxirantahay tirada amarka iyo xilliga aad amarka siiso. Caadi ahaan waxay noqon doontaa 25 - 35 maalmood. Waxaan nahay warshad waxaan leenahay qulqulka badeecada oo xoogan, waxaan kuu soo jeedineynaa inaad bilowdo baaritaan labo bilood ka hor taariikhda aad jeclaan laheyd inaad alaabadaada ka hesho wadankaaga.
7.Q: Waa maxay shuruudaha lacag bixintaada?
A: Waxaan aqbalnaa T / T, Paypal, West Union.
8.Q: Sida loola xiriiro?
J: Waxaan jeclaan lahayn inaan kaa caawinno wixii su'aalo ama jawaab celin ah ee aad hayso!
Waxaan halkaan u joognaa inaan ku caawinno — fadlan si xor ah noogu soo dir irisbecosmetics@gmail.com.
Hore: Waxyaalaha la isku qurxiyo ee astaanta gaarka ah ee alaabta indhaha lagu qurxiyo ee wax lagu iibiyo
Xiga: palette indhashareer palette vegan midab sare astaanta gaarka ah eyeshadow palette caadadii aad logo u gaar ah
eyeshadow palette caadadii
pa eyeshadow palette astaanta gaarka ah caadada
palette eyeshadow dabiiciga ah
palette eyeshadow jumlo
palette midabka midabka jumlada jumlada ah
Palette astaanta u ah astaanta gaarka ah ee la isku qurxiyo ...
Palette qurxiyo eyeshadow shaybaarka gaarka loo leeyahay ...
midabka jaalaha jumlada midabka midabka sare ...
qalin suni qurxiyo sumadda gaarka loo leeyahay dheer lastin ...
Haddii aad rabto inaad ogaato faahfaahin dheeraad ah, fadlan noo soo dir baaritaan hadda.
Lambarka 168, Lane 6495, Tingwei Road, Jinshan Industrial Zone, Shanghai